Ukusonga iitshokholethi zeHalloween | Imisebenzi yezandla
Molweni nonke! Kule mveliso siza kubona ukuba njani Songela iitshokholethi ukunika iHalloween. Bafezekile kwitheko okanye banike xa abantwana benkqonkqoza emnyango wakho.
1 Izinto esiza kuzidinga ukusonga iitshokholethi zethu
Izinto esiza kuzidinga ukusonga iitshokholethi zethu
Ikhadibhodi emnyama enemibala kunye / okanye yemarbon
Amehlo obuqhetseba okanye amehlo enziwe ngekhadi elimnyama nelomhlophe
Intonga yeglue okanye enye iglu yekhadikophu eyomileyo ngokukhawuleza
Ibha yetshokholethi esongelwe ngaphakathi, edla ngokuba nefoyile yealuminium. Olunye ukhetho kukuthenga ibha yetshokholethi enkulu kwaye uyinqumle ngemiqolo, umqolo ngamnye usongelwe ngefoyile yealuminiyam kwaye ngenxa yoko sifumana iitshokholethi ezininzi.
Sibeka ibha yetshokholethi ngaphezulu kwekhadibhodi kwaye Sinqumle uxande olungaphezulu kancinci kunebha yetshokholethi kwaye ububanzi balo buphindwe kathathu.
Kule meko siza kwenza ifayile ye- isongezo sevampire kwibha yetshokholethi kwaye ngenxa yeso sizathu siza kusebenzisa ikhadibhodi yemaroon. Nangona kunjalo, unokwenza isongelo sebhethi esimile kunye nekhadibhodi emnyama. Ukuba uza kusonga iitshokholethi ezininzi ungasebenzisa isongelo sokuqala setemplate kwaye usike uninzi ngombala omnyama kunye nemaron.
Xa sele sinesikwere siya kuthi Songa ikhadibhodi ibe ngamacandelo amathathu. Sifaka ibha yetshokholethi kwindawo esembindini kwaye simakisha ngepensile ngasentla nangaphantsi. Siza kusika iinxalenye zamacala ekuphakameni.
Siza kunika imilo ye-vampire cape emacaleni.
Kwindawo esembindini siya kuyilungisa intloko ye-vampire kwisiqwenga sekhadibhodi esiphumayo. Kwaye emazantsi siya kunika imilo yeebhutsi. Sipeyinta iibhutsi ezimnyama kwaye sihombise intloko.
Sibeka iglu encinci embindini wekhadibhodi, sincamathelisa ibha yetshokholethi kwaye sivale amacala njenge-vampire cape, esiya kuyincamathelisa phakathi kwabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Izihlandlo ezikhethekileyo » Imisebenzi yeHalloween » Ukusonga iitshokholethi zeHalloween